Top 15 NGO Deeqaha Ardayda Masaakiinta ah
Top 15 NGO Deeqaha Ardayda Saboolka ah
Boggan, waxaad ka heli doontaa deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan ee NGO-yada loogu talagalay ardayda saboolka ah ee liistada ku qoran si loo caawiyo tiro ka mid ah ardaydaas oo kale oo aan awoodin inay sii wataan ama sii wataan himilooyinkooda waxbarasho iyo shaqadooda sababo la xiriira caqabado dhaqaale.
Qiimaha badan ee waxbarashadu waxay ku adkaatay ardayda badankood aduunka oo idil inay wax ku bartaan goob waxbarasho. Dhanka kale, ardayda qaar waxay aadaan illaa amaahda ardayda oo ay markaa ku galaan deyn.
Ardayda aan haysan wax macno ah oo ay ku heli karaan amaahda ardayga ama xitaa dib u bixin karaan waxay ka baxaan iskuulka. Waa sababahan awgood in ururada aan dawliga ahayn ee ugu sareeya aduunka oo dhan ay isku xilqaameen inay caawiyaan ardayda saboolka ah ee weli leh hamiga waxbarasho.
Sidaa awgeed, maqaalkani wuxuu qori doonaa deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya NGO-yada ardayda saboolka ah ee adduunka oo idil.
1 Ma jiraan 100% deeq waxbarasho oo buuxda oo NGO ah?
2 Sideen ku heli karaa deeq waxbarasho NGO?
3 Deeqda waxbarasho ee ugu sareysa NGO-yada Ardayda Saboolka ah
3.1 Deeqda waxbarasho ee Wells Mountain
3.2 Google ICT deeq waxbarasho
3.4 KULeuven IRO deeq waxbarasho
3.5 Deeq waxbarasho oo caalami ah ee Aga Khan
3.6 Deeqda waxbarasho ee Forte
3.7 Alpha Delta Kappa Deeqaha
3.8 Anne van den Ban Fund deeq waxbarasho
3.9 Barnaamijka Waxbarashada Kansarka-HOPE
3.10 Christine Bolt deeq waxbarasho
3.11 Deeqda waxbarasho ee Eric Bleumink
3.12 Aasaaska Deeqaha Caalamiga ah ee Honjo
3.13 Margaret McNamara Scholarship Fund
3.14 Mu’asasada Mo Ibrahim ee GDAI Ph.D. Deeq waxbarasho
3.15 Talo soo jeedin
Ma jiraan 100% deeq waxbarasho oo buuxda oo NGO ah?
Haa. Waxaa jira deeqo waxbarasho oo aan badnayn oo si buuxda loo maalgeliyey oo loo heli karo ardayda inay ku sii wataan shahaado kasta oo ay doortaan xarumaha tacliinta sare adduunka oo dhan. Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee buuxa ee NGO-ga maqaalkan.
Sideen ku heli karaa deeq waxbarasho NGO?
Ku guuleysiga deeqda waxbarasho ee NGO waxay la mid tahay ku guuleysiga deeq kasta oo kale. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad buuxiso shuruudaha u-qalmitaanka ee mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ee NGO-yada ee loogu talagalay ardayda saboolka ah oo aad u dirto codsiyadaada ka hor waqtiga kama-dambaysta ah.
Intaas ka dib, waa inaad hubisaa inaad hubiso emaylkaaga iyo websaydhka deeqda waxbarasho si joogto ah si aad u ogaato goorta magacyada dadka qaata la daabici doono.
Deeqda waxbarasho ee ugu sareysa NGO-yada Ardayda Saboolka ah
Hoos waxaa ku yaal deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya NGO-yada loogu talagalay ardayda saboolka ah ee adduunka oo dhan:
Deeqda waxbarasho ee Wells Mountain
Google ICT deeq waxbarasho
KULeuven IRO deeq waxbarasho
Deeqaha Caafimaadka Caalamiga ah
Deeq waxbarasho oo caalami ah ee Aga Khan
Deeqda waxbarasho ee Forte
Alpha Delta Kappa Deeqaha
Anne van den Ban Fund deeq waxbarasho
Barnaamijka Waxbarashada Kansarka-HOPE
Christine Bolt deeq waxbarasho
Deeqda waxbarasho ee Eric Bleumink
Aasaaska Deeqaha Caalamiga ah ee Honjo
Margaret McNamara Scholarship Fund
Mo Ibrahim GDAI Ph.D. Deeq waxbarasho
Wells Mountain Foundation waxay siisaa deeqo badan oo ardayda ah si ay ugu daba galaan barnaamijyada shahaadada koowaad ee caafimaadka & cilmiga caafimaadka, horumarinta bulshada, sharciga, waxbarashada, shaqada bulshada, ganacsiga, tikniyoolajiyadda macluumaadka, beeraha, iyo injineernimada.
Deeqdan waxbarasho ee aan dawliga ahayn ee ardayda saboolka ah waxaa bixiya Wells Mountain Foundation iyada oo loo marayo barnaamijka Awoodsiinta Iyada oo loo marayo Waxbarashada (ETE).
Celceliska u qalma deeqda waxbarasho ee ETE $ 1500 sanadkiiba. Waxay ka kooban tahay kharashka waxbarashada iyo khidmadaha, buugaagta, cuntada, iyo hoyga.
Codsadeyaashu waa inay ahaadaan arday dhamaystay waxbarashadooda dugsiga sare oo raadinaya shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama diblooma.
Musharrixiinta waa inay ka sarreeyaan da'da 35 da'da
Codsadeyaashu waa inay wax ku bartaan waddankooda hooyo ama waddan kale oo soo koraya
Ka-faa'iideystayaasha la filayo waa in lagu qoraa barnaamij daraasad oo faa'iido u leh bulshadooda iyo / ama waddamada ay ka yimaadeen.
Deeqda deeqda waxbarasho
Deeqda waxbarasho ee Google ICT waxaa loo heli karaa haweenka si loogu dhiirrigeliyo inay ku fiicnaadaan kombuyuutarka iyo teknolojiyadda macluumaadka ayna noqdaan ku dayasho firfircoon iyo hoggaamiyeyaasha bulshada.
Kuwa qaata deeqdan waxbarasho ee NGO ee ardayda saboolka ah ayaa soo bixi doonta iyadoo lagu saleynayo taariikhdooda waxbarasho waxayna muujiyeen tayada hoggaaminta.
Qiimaha deeqda waxbarasho ee Google ICT waa $ 10,000. Lacag dhan $ 1,000 ayaa la siin doonaa mid kasta oo ka mid ah finalka.
Codsadeyaashu waa inay ku jiraan sanad-dugsiyeedkooda sare ee daraasadda koowaad ama lagu qoro barnaamijka shahaadada qalin-jabinta a jaamacadda Mareykanka.
Musharrixiinta waa inay ku sarreeyaan sayniska kombiyuutarka, injineernimada kombiyuutarka, ama wixii farsamo ah ee la xiriira.
Abaalmarinta mustaqbalka waa in lagu qoraa daraasad waqti-buuxa ah.
Codsadeyaashu waa inay lahaadaan ugu yaraan GPA isugeyn ah oo ah 3.5 miisaanka 4.0 ama 4.5 miisaanka 5.0.
Deeqda waxbarasho ee wadajirka ah ee 'Erasmus Mundus Joint Scholarships' ayaa loo heli karaa ardayda ka kala socota labada waddan ee EU iyo kuwa aan Midowga Yurub ahayn si ay u sii wadaan barnaamijyada shahaadada mastarka. Deeqdan waxbarasho ee NGO ee ardayda saboolka ah waxaa maalgeliya Midowga Yurub.
Qiimaha barnaamijka EMJMD waxaa ka mid ah tabarucaadka kharashaadka kaqeybgalka ardayda (oo ay kujiraan khidmadaha waxbarashada iyo caymiska buuxa), tabaruca ardayda safarka iyo rakibaadda, iyo gunno bille ah inta lagu jiro barnaamijka.
Musharrixiinta waa inay noqdaan arday ka socda meel kasta oo adduunka ah oo raba inuu sii wado barnaamijka shahaadada mastarka
Codsadeyaashu waa inay boos ka helaan barnaamijka shahaadada kahor codsigooda
KULeuven IRO waxay sanad walba siisaa deeqo waxbarasho ardayda aadka ufiican ee kasoo jeeda wadamada soo koraya si ay ugu sii wataan barnaamijyada dhaqtarka ama pre-doctoral ee LU Leuven, Belgium.
Qaatayaasha waxay haystaan ​​ugu badnaan shan (5) sano oo ay ugu raaxaystaan ​​deeqda waxbarasho; hal (1) sanad dhakhtarka ka hor iyo afar (4) sano dhakhtar.
Deeqdan waxbarasho ee aan dawliga ahayn ee ardayda saboolka ah waa la cusbooneysiin karaa sannad kasta iyadoo kuxiran qiimeynta kormeeraha ka-faa'iideystaha sannad kasta.
Musharrixiinta waa inay noqdaan muwaadin dal soo koraya oo laga aqoonsan yahay liiska OECD-DAC.
Codsadeyaashu waa inaysan ka badnaan 35 sano.
Abaalmarinta mustaqbalka waa inay lahaadaan natiijooyin tacliimeed oo wanaagsan.
Aga Khan Foundation waa hay'ad caalami ah oo deeq waxbarasho siisa ardayda ka socota wadamada soo koraya si ay wax ugu bartaan jaamacadaha Canada, Mareykanka, Faransiiska, iyo Boortaqiiska.
Ka-faa'iideystayaasha waxay dooran karaan inay sii wataan daraasado jaamacadeed oo ku saabsan Dhismaha, Caafimaadka, Bulshada Rayidka, Qorsheynta & Dhismaha, Dhaqanka, Horumarinta Reer Miyiga, Horumarinta Dhaqaalaha, Gargaarka Bani'aadamnimada, Waxbarashada, iyo Muusigga.
Deeqdani waxay daboolaysaa kharashka waxbarashada iyo hoyga oo keliya.
Codsadeyaashu waa inay ka yimaadaan waddan soo koraya
Kuwa qaata mustaqbalka waa inay muujiyaan baahida dhaqaale oo ay yeeshaan diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah
Musharrixiinta waa inaysan ka weynaan da'da 30 da'da
Hay'adda Forté Foundation waxay u abuurtay deeq waxbarasho dheddigga si loogu dhiirrigeliyo inay iska diiwaangeliyaan barnaamijyo waqti-buuxa ah, waqti-dhiman ah, ama fulin MBA ah oo jaamacad dibedda ah.
Faa'iidooyinka deeqda waxbarasho waa tiro badan yihiin. Marka laga reebo taageerada dhaqaale ee la siiyo dadka qaata, waxaa jira faa'iidooyin kale oo ay bixiso Forté Foundation, waxaana ka mid ah:
Kaqeybgalka Shirka Hogaanka Haweenka Forté MBA ee sanadlaha ah iyo Shirka Adeegyada Dhaqaalaha FAST Track Conference
Helitaanka kooxaha isku xirka gaarka ah ee Forté Fellows, Forté Fellow Alumnae, iyo Forté Fellow LinkedIn group iyo kooxaha Facebook
E-hordhac gaar ah oo loogu talagalay shirkadaha kafaala qaadaya Forté iyo ka mid noqoshada buuga 'Fellow', oo loo qaybiyo dhammaan shirkadaha kafaala qaada
Nolol Bilaash ah Forté Foundation Xubinnimada ($ 50 sanadkiiba)
Hanuunin iyo fursado aad kulaxiriirto saaxiibada kale iyo wakiilada Forté ee xaruntaada
Codsadeyaashu waa inay muujiyaan xirfado hoggaamineed oo adag koox ahaan ama hoggaamiyeyaasha bulshada oo ay muujiyaan ballanqaad ku aaddan ka caawinta haweenka inay gaaraan kartidooda shaqo.
Musharrixiinta waa inay lahaadaan asal tacliineed oo adag iyo rikoodh heer sare ah oo xirfad-yaqaannimo lagu gaaro
Ku guuleystayaasha abaalmarinta waxay u baahan doonaan inay haystaan ​​ugu yaraan Shahaadada Fasalka Labaad ee Boqortooyada Midowday ama u dhiganta caalamiga ah
Musharrixiinta ka socda hay'adaha aqoonta leh waa inay lahaadaan ugu yaraan celcelis ahaan celcelis ahaan 7/10 ama 60%.
Codsadayaasha ka socda hay'adaha kale ee la aqoonsan yahay waa inay helaan ugu yaraan celcelis guud oo u dhexeeya 7.5-8 / 10 ama 65-70%.
Kuwa qaata mustaqbalka waa inay lahaadaan ugu yaraan seddex sano oo khibrad shaqo ku-meel-gaar ah.
Deeqda waxbarasho ee 'Alpha Delta Kappa' waxaa loo heli karaa haweenka xiisaynaya barashada farsamooyinka waxbarasho ee Mareykanka.
Qaatayaasha waxay helayaan $ 10,000 taas oo dabooli doonta kharashka waxbarashadooda kulleej ama jaamacad ku taal Mareykanka. Deeqda waxbarasho ee 'Alpha Delta Kappa' waxay sii waddaa inay noqoto mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya NGO-yada ardayda saboolka ah ee adduunka.
Codsadeyaashu waa inay noqdaan dumar keligood ah oo aan lahayn cid ku tiirsan waana inay xajistaan ​​heerkaas inta lagu jiro muddada deeqda waxbarasho
Musharrixiinta waa inay noqdaan muwaadin Mareykan ah oo ku nool meel ka baxsan Mareykanka waana inay ilaaliyaan heerkaas inta lagu jiro muddada deeqda waxbarasho
Codsadeyaashu waa inay udhaxeeyaan da'da 20 iyo 35 sano kahor waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga daraasadda sanadka waa inay bilaabmaan
Deeqdan waxbarasho waxaa loogu magac daray Dr. Anne van den Ban oo borofisar ka ahayd Jaamacadda Wageningen. Waxay iskaashi la leedahay Jaamacadda Wageningen.
Anne van den Ban Scholarship ayaa loo aasaasay inay ka caawiso ardayda ka socota wadamada soo koraya iyo wadamada Bariga Dhexe iyo Bariga Yurub inay ku sii wataan shahaadada Jaamacadda Wageningen.
Deeqdan waxbarasho ee ugu sareysa NGO-yada ee ardayda saboolka ah ayaa loo heli karaa inay waxbartaan si ay u helaan aqoonta iyo xirfadaha looga baahan yahay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhismaha ee dalkooda ee wax soo saarka beeraha, horumarinta reer miyiga, iyo deegaanka.
Musharrixiinta waa in loo aqbalaa daraasaddooda ay doorteen ee Wageningen
Codsadeyaashu waa inay haystaan ​​diiwaanno tacliimeed oo aad u wanaagsan oo ka yimid dalkooda
Musharrixiinta waa inay diyaar u noqdaan inay ku noqdaan dalkooda markay dhammeeyaan shahaadadooda
Deeqda waxbarasho ee 'CANADA-HOPE' waxaa heli kara ardayda da 'yarta ah ee rajada leh ee saynisyahannada iyo daaweeyayaasha ka socda Dalalka Dakhliga Hoose iyo Kuwa Dhexe (LMIC), sida ku cad Hay'adda Horumarinta Caalamiga ee Kanada (CIDA) iyo Qaramada Midoobay (UN) si ay uga caawiso wax ka baro qaar ka mid ah shaybaarada sayniska ugu fiican iyo jawiyada tababarka ee Kanada.
Inta lagu jiro barnaamijka, ardayda waxaa la talin doona cilmi baarayaal caan ah oo reer Kanada ah si ay u helaan aqoon iyo khibrad gacmeed si ay wax ugu soo kordhiyaan dalalkooda markay dhammeeyaan waxbarashadooda Kanada.
Kuwa qaata mustaqbalka waa inay lahaadaan lataliye laxiriira hay'ad la aqoonsan yahay oo ku taal Kanada iyo kafaala qaadista hay'ad la aqoonsan yahay oo ku taal koonfurta Aasiya (Hindiya, Pakistan, Bangladesh Sri Lanka, Nepal, iyo Bhutan) ama Sub-Sahara Africa.
Codsadeyaasha haysta dhalashada Kanada ama codsaday deganaanshaha joogtada ah ee Kanada looma tixgelin doono deeqda waxbarasho.
Deeqdan waxbarasho waxaa loo aasaasay xusuusta Christine Ian Bolt oo ahayd borofisar Emeritus ah oo taariikhda ka bartay Jaamacadda Kent. Waxaa maalgeliya ninkeeda Ian Bolt.
Waxaa loo heli karaa ardayda jaamacadeed ee fulinaya cilmi baarista taariikhda Mareykanka iyo / ama halka xarunta cilmi baarista ama isha laga helayo ay ku taal Mareykanka Intaa waxaa sii dheer, abaalmarinta ayaa u oggolaan doonta ardayda inay baaraan MPhil ama Ph.D. qoraalka ku yaal Mareykanka.
Qiimaha deeqdani waa £ 10,000 waxayna daboolaysaa kharashka waxbarashada iyo kharashaadka kale inta lagu jiro mudada baaritaanka Mareykanka
Codsadeyaashu waa inay haystaan ​​shahaadada bachelorka ee ugu fiican (doorbidayaa fasalka koowaad ama fasalka labaad ee sare) ama shahaadada mastarka (mudnaanta ama kala soocida).
Musharrixiinta waa inay lahaadaan xirfado isgaarsiineed oo wanaagsan (qoraal iyo hadalba) waana inay diyaar u ahaadaan inay sharraxaan mashruucooda si cad iyagoon adeegsanayn ereyo murugsan kuwa aan khubarada ahayn.
Deeqda waxbarasho ee 'Eric Bleumink Fund' waxaa loogu talagalay ardayda hibada leh iyo saynisyahannada da'da yar ee ka socda waddamada soo koraya si ay u sii wataan barnaamijka shahaadada mastarka. Waxay u furan tahay oo keliya ardayda heshay (xaalad) gelitaan ah si ay u bartaan barnaamijka mastarka kahor waqtiga kama dambaysta ah ee deeqda waxbarasho.
Intaa waxaa sii dheer, waxay daboolaysaa kharashka waxbarashada, safarka, nolosha, buugaagta, iyo caymiska caafimaadka.
Musharrixiinta waa inay muujiyaan waxqabad tacliimeed oo heer sare ah waana inay ku muuqataa xarfaha talooyinka
Codsadeyaashu waa inay ku heleen ogolaansho shuruud ah doorashada barnaamijka shahaadada mastarka
Ka-faa'iideystayaasha qorshaysan waa inay lahaadaan darajooyin aad u wanaagsan waxbarashadooda jaamacadeed
Musharrixiinta waa inay muujiyaan caddeynta aqoonta luqadda Ingiriisiga iyada oo ku saleysan shuruudaha gelitaanka ee barnaamijka doorashada
Codsadeyaashu waa inay diyaar noqdaan inta lagu jiro barnaamijka oo ay qaataan daraasadaha
Musharrixiinta waa inaysan haysan taageero maaliyadeed barnaamijka
The Deeqda waxbarasho ee caalamiga ah ee 'Honjo' waxay u furan tahay ardayda caalamiga ah inay wax ku bartaan barnaamij kasta oo qalin jabiya oo ay doortaan machad Japan ah oo tacliin sare ah.
Qiimaha abaalmarinta waxay kuxirantahay mudada barnaamijka. Barnaamijyada qalin-jabinta ee u dhexeeya 1 illaa 2 sano, qaatayaasha waxay heli doonaan 200,000 Yen bishiiba. Qaatayaasha baranaya barnaamijyada qalin-jabinta ee muddada dheer ee saddex (3) sano iyo wixii ka sarreeya waxay heli doonaan 180,000 yen bishiiba.
Barnaamijyada qalin-jabinta ee 4 sano iyo wixii ka sareeya, ka-faa'iideystayaasha waxay heli doonaan 150,000 yen bil kasta.
Codsadeyaashu waa inay iska diiwaangeliyeen inay waxbartaan ama lasiiyay gelitaan ay ku bartaan barnaamijka qalinjabinta wixii ka dambeeya 1da Abriil. Waa inay sidoo kale keenaan shahaadada isqorista ama warqad ogolaansho ah.
Musharrixiinta iska diiwaangelinaya barnaamijka shahaadada mastarka waa inaysan ka badnaan da'da 30 da'da halka kuwa iska diiwaangelinaya Ph.D. barnaamijka waa inuusan ka badnaan 35 sano.
Codsadeyaashu waa inay u xaqiijiyaan guddiga inay awood u yeelan doonaan inay shaqooyin ka helaan dalalkooda markay dhammeeyaan barnaamijyadooda qalin-jabinta.
Musharrixiinta waa inaysan haysan dhalashada Japan.
Codsadeyaashu waa inay muujiyaan baahida dhaqaale.
Sanduuqa Margaret McNamara ee loo yaqaan 'Memorial Fund' ayaa bixiya deeqo waxbarasho oo fara badan sannad kasta dumarka ka socda dalalka soo koraya. Ujeedada MMEG waa in kor loo qaado waxbarashada gabdhahaan ardayda ah si ay u yeeshaan xirfado hogaamineed oo saameyn ku leh nolosha haweenka iyo caruurta ee wadamada soo koraya.
Qorshuhu wuxuu ku siiyaa $ 15,000 abaalmarin haween ka socda dalalka soo koraya iyo kuwa dakhligoodu dhexdhexaadka yahay. Markay dhammeeyaan waxbarashadooda, haweenkan waxay ku laaban doonaan waddammadoodii ama waddan kale oo soo koraya si loo horumariyo nolosha haweenka iyo carruurta halkaas ku nool.
Codsadeyaashu waa inay noqdaan muwaadiniin waddan ku qoran Liiska U-qalmitaanka Waddanka MMMF
Abaalmarinta la doonayo waa inay ahaato 25 sano iyo wixii ka sareeya kahor waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga
Musharrixiinta waa inay muujiyaan u heellan inay ka shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa haweenka iyo carruurta dalalka soo koraya
Codsadeyaashu waa inay ka diiwaangashan yihiin hay'ad la aqoonsan yahay ka hor inta aan la codsan oo la qorsheynayo in lagu qoro daraasado waqti-buuxa ah markay helaan abaalmarinta
Musharrixiinta waa inaysan waligood qaraabo u noqonin xubin ka tirsan shaqaalaha ama sayga / xaaska u shaqeeya koox ka tirsan Bangiga Adduunka, Sanduuqa Lacagta Adduunka, ama Bangiga Horumarinta Ameerika.
Codsadeyaashu waa inaysan noqonin kuwo qaata deeq kasta oo MMMF horey ah
Mu’asasada Mo Ibrahim ee GDAI Ph.D. Deeq waxbarasho
Hay'adda Mo Ibrahim Foundation (MIF) waxay ardayda siisaa sannad kasta deeqaha waxbarasho ee Afrika si ay u bartaan Ph.D. waqti-buuxa ah. barnaamijka ku saabsan Maamulka ee Horumarinta Afrika ee Jaamacadda London ee Boqortooyada Ingiriiska
Musharixiinta guuleysta waxay heli doonaan £ 5,000 sanadka 2 iyo 3 ee barnaamijka daraasadda. Deeqdani waxay dabooli doontaa kharashka waxbarashada muddo saddex sano ah iyo kharashka hoyga sannadka koowaad iyo saddexaad ee barnaamijka oo keliya. Intaa waxaa sii dheer, abaalmarinta ayaa dabooli doonta laba tikidhada duulimaadka soo noqoshada (mid inta lagu jiro sanadka koowaad iyo mid loogu talagalay viva).
Musharrixiinta waa inay ahaadaan degane rasmi ah dal Afrikaan ah
Codsadayaasha degan Degmooyinka ka hooseeya Saxaraha Afrika ayaa la siin doonaa mudnaan dheeraad ah
Deeqaha ugu sareeya ee UAE ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah (Ardayda Caalamiga ah)
Deeqaha ugu sareeya ee UAE ee loogu talagalay Ardayda Hindida ah
Deeq waxbarasho oo dhamaystiran oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Yurub
NGO-yada deeqaha waxbarasho ee Nigeria oo leh shuruudaha u-qalmitaanka
Talooyinka deeqaha waxbarasho Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
Previous Post:13 Jaamacadaha Kanadiyaanka leh Heerarka Aqbalashada Sare
Post Next:37 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo Ivy League ah oo leh Xiriirinta Codsiga Tooska ah
Pingback: 11 Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarshada ee Ireland Ardayda Caalamiga ah 2021
barashada internetka wuxuu leeyahay,
June 22, 2021 at 5: 47 pm
Macluumaadkani waa mid aad u xiiso badan. Fikrado badan ayaa laga helaa macluumaadkan si cilmi baaris loogu sameeyo.
Journal Teknik wuxuu leeyahay,
June 22, 2021 at 5: 28 pm
Mary Judy An Noda wuxuu leeyahay,
June 8, 2021 at 5: 31 pm
Maalin wanaagsan dhamaantiin. Fadlan waxaan ubaahanahay deeqdan waxbarasho. Sababtoo ah, tani waxay muhiim u tahay waxbarashadayda waxayna ka caawinaysaa fursadayda. Mahadsanid iyo ilaah la'aan
June 9, 2021 at 10: 02 pm
Waxaad codsan kartaa